Master Lu wuxuu qiimeeyaa Sharafta 20, astaanta soo socota ee astaanta | Androidsis
Ka dib markii ay Huawei sii deysay qoryaheeda waaweyn qeybtii hore ee 2019, kuwaas oo ahaa P30, waxaa la joogaa waqtigii sharafku u noqon lahaa xarunta dareenka, bal daqiiqad ahaw.
El dhexdhexaad Mudane 20i ayaa la shaaciyey maalmo ka hor, haddana shirkaddu waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto qaabkeeda calanka, taas oo noqon doonta Sharaf 20. Tani hadda waxay soo martay Master Lu, oo ah jaangooyada Shiinaha, waxaana lagu qiimeeyay inay tahay terminal waxqabad sare leh.
Sidaan sheegnay, Sharafta 20 waxaa lagu arkay barxadda Master Lu. Liiska waxaa lagu faahfaahiyay magaca lambarka «YAL-AL00». Tani waxay xaqiijineysaa qaar ka mid ah astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee qalabka xoogga badan.
Waxa ugu horreeya ee ay daaha ka qaaday ayaa ah waxaa ku shaqeeya processor-ka shirkadda Huawei, HiSilicon Kirin 980 7 nm iyo sideed buundo, waxayna la jaan qaadi doontaa 8 GB oo RAM ah. Intaas waxaa sii dheer, xallinta shaashadda waxaa lagu sheegay inay tahay FullHD + oo ah 2,340 x 1,080 pixels, taasoo xaqiijinaysa saamigeeda 19.5: 9. Haddii aad xusuusato, xitaa Honor 20i waxay la timid isla qaraar.
Per se, qaabku wuxuu ku guuleystey inuu helo dhibco ah 338,924 tusmada qiyaasta, taas oo u dhigaysa qaybta dhamaadka sare wax badanna nooga sheegaysa waxqabadka ay bixin doonto iyo waxqabadka ay gacantaada ku geli doonto, marka la helo.
Ugu dambeyntiina, waxaa xusid mudan taas Sharafta 20 waxay noqon doontaa aalad aad muhiim ugu ah qorshaha ciyaarta astaanta sanadka 2019. Honor iyo Huawei waxay ujeedadoodu tahay inay noqdaan hogaamiyaha adduunka ee sameeya taleefannada casriga dhamaadka sanadkan. in kasta oo Maamuus, sida oo kale, uu ka fog yahay. Huawei, dhinaceeda, waxay aad ugu dhowdahay in lagu guuleysto; hadda waa shirkadda labaad ee ugu weyn ee soo saarta taleefanka gacanta, waxaana ka dambeeya oo keliya Koonfurta Kuuriya Samsung.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Master Lu wuxuu qiimeeyaa Honor 20, oo ah astaanta soo socota ee astaanta